Digniinta warbixinta Q. M. - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Digniinta warbixinta Q. M.
Digniinta warbixinta Q. M.
iftineducation.com - Warbixinta hay'adaha Qaramada Midoobay ee aagagga hore ka shaqeeya waxay magacawday, oo muujisay ayna xal ugu yaboohday lix arrimood oo soo baxaya, oo ay ku jiraan halista caafimaadka bani'aadamka uga imanaysa qashinka bacaha aadka u faraha badan ee badaheenna lagu shubayo iyo doorka muhiimka ah ee qaybta dhaqaalaha adduunku ay ka qaadan karto in adduunyada loo jiheeyo mustaqbal neefta carbon ay ku yar tahay, khayraad fiicanna leh.
Isbeddelka cimilada waxaa uu durbadiiba saameyn weyn ku yeeshay fayoobida iyo ammaanka cuntada. Warbixintu waxay eegtay sida abaarta iyo heerkulka sare ay kicin karaan kiimikooyin ku jira cuntada bakaaraha oo sun u ah xayawaanka iyo dadkaba.
Qamadiga iyo miraha la bahda ah, galleyda iyo mesegada waxay ka mid yihiin miraha beeraha ee aadka ugu nugul in cusbadu ku badato, taasoo ay keento abaar dheeraata. Sunta cusbada ama milixda oo xayawaanka ku badata waxay horseedi kartaa inay dhiciyaan, neefta oo ku dhegta iyo dhimasho, taas oo baabi'inaysa nolosha beeraleyda yaryar iyo xoolo dhaqatada.
Roobabka xoogga leh ee da'a abaar dheer kaddib waxay kaloo keeni karaan sun is-urursata oo la yiraa Hydrogen Cyanide ama aashito ku dhacda miraha ay ka midka yihiin galleyda, sarreenka, tufaaxa iyo qaar kaloo badan.
Sunta ka dhalata Fungi, ayaa waxay keeni kartaa cudurka cancer-ka iyo carruur cillado ku dhalata, waana dhibaatooyin kale oo ka soo baxaya miraha beeraha. Halista ah in lagu sumoobo cuntada beeraha ka timaad, gaar ahaan galleyda, waxaa la filayaa inay ku sii korodho dhulka aadka u fogfog cimilada sii kululaanaysa awgeed.
Daraasad dhowaan la sameeyay waxay saadaalinaysaa in suntani ay Yurub ka noqon doonto arrin ku saabsan fayaqabka cuntada, gaar ahaan marka ay timaad in cimilada adduunku ay sare u kacdo 2 darajo oo centigrade ah.
Cudurrada ay xayawaanka iyo dadku isu-gudbiyaan ayaa sare u kacaya. Warbixinta hay'adaha QM ee safka hore ka hawl gala waxay muujinaysa sida sare u kacani xiriir ula leeyahay caafimaadka wada noolaashaha xayawaanka, dhirta iyo jeermiska.
Hawlaha bani'aadamku qabto ee ku xadgudbaya deegaanka dabiiciga ah, waxay cudurrada ku jira berkedadaha duurka ku yaal awood u siiyaan inay si aad u sahlan u gaaraan xoolaha iyo dadka.